ရယ်ခြင်းကြီးသုံးပါး | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ရယ်ခြင်းကြီးသုံးပါး	Posted by mm thinker on July 8, 2008
Posted in: Poem, Sharing.	Tagged: Poem, Sharing.	သုံးပါးတသီး၊ ရယ်ခြင်းကြီးကား၊ ဇနီးအိမ်ရှင်၊ မိမိလင်လည်း၊ ချစ်ခင်သောအား၊ သမီးသားကို၊ ပိုက်ဖျားအားရမ်း၊ ချီရှုတ်နမ်းသော်၊ မယ်ဝမ်းကမွေး၊ သူများသွေးကို၊ အလေးတမြတ်၊ သင့်သားမှတ်၍၊ လှည့်ပတ်ဖက်ချီ၊ နမ်းလေပြီဟု၊ မထီမလေး၊ အသွမ်းသွေး၍၊ အဝေးမျက်ကွယ်၊ မယားရယ်၏။
← ဆန်းစစ်ချက်	Math-Toon -1 (သင်္ချာကာတွန်းများ – ၁) →	Pages	about